Wadajir ayaan ammaanka uga shaqeynaynaa: Waxaan soojeedinaynaa in gaadiidka dadweynaha lagu dhex isticmaalo af-shareerka | HSL
HSL waxay soojeedinaysaa in gaadiidka dadweynaha lagu dhex isticmaalo af-shareerka. Waxaa la filayaa in dadka ku safraya gaadiidku ay kordhaan deyrta, mana ahan wax markasta dhici kara in dadka kale ee ku safraya gaadiidka dadweynaha laga fogaado masaafo dhan 1-2 mitir. Waxaan weli ku talinaynaa in xilliga safarka lagu aaddiyo, haddii ay suurragaltahay wakhtiyada ka baxsan xilliyada ciriiriga.
Isticmaalka af-shareerku waa mid kamid ah hababka looga taxaddarayo faafitaanka fayruska Korona. Tilmaanbixinnada kale ee ku saabsan sida ammaanka ah ee loo safro ayaa weli muhiim u ah sidii hore si lamid ah: ha safrin adigoo jirran, sida ugu macquulsan uga fogow dadka kale ee kula safraya, xusuusnow in aad gacmahaada dhaqdo, haddii aad u baahato in aad qufacdo ama hindhistana, ku qufac ama hindhis laabatada xusulkaada ama fasaleeti.
Soojeedinteena la xiriirta af-shareerku waxay la socotaa soojeedinnada qaranka, haddii loo baahdana waan faahfaahinaynaa soojeedinteena.
Af-shareer noocee ah ayaa loo baahanyahay?
Waxaad isticmaali kartaa af iyo san-shareerka halka mar la isticmaalo ama waxaad isticmaali kartaa tusaale ahaan af-shareerka marada ah. Muhiimaddu waa in la ilaaliyo afka iyo sanka. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan af-shareeryada iyo isticmaalkoodaba waxaad ka heleysaa bogagga shababadda THL.
Ma safri karaa, haddii aanan haysan af-shareer?
Waxaan rajaynaynaa in dadka badankood ay isticmaalaan af-shareerka – haddii sidaas la sameeyaana, gaadiidku wuxuu dadka oo dhan u noqonayaa mid ammaan ah. Si kastaba ha ahaatee waan fahamsannahay, in isticmaalidda af-shareerku aanay dadka oo dhan suurragal u ahayn tusaale ahaan sababo caafimaad dartood. Sidaas darteed, arrintani waa soojeedin ee ma ahan waajib. Haddii adiga oo isticaalaya af-shareer aad aragto qof kale oo aan isticmaalayn, waxaan rajaynaynaa in aadan qofkaas xusuusin arrintan.
Waa maxay sababta soojeedintu ay gaadiidka dadweynaha u quseyso?
Waxaa gudaha gaadiidka ka dhalan kara xaalado aanay suurragal ahayn in dadka kale ee gaadiidka kugula safraya aad u jirsato masaafada ammaanka. Si kastaba ha ahaatee waxaan doonaynaa in aanu samaynno waxkasta awooddeena ah, si gaadiidka dadweynuhu uu ammaan u noqdo xittaa marka xaaladahan lagu jiro.
Soojedintu miyeey sidoo kale quseysaa shaqaalaha gaadiidka dadweynaha?
Shaqaalaha xiriir taabasho oo dhow la leh macaamiisha ee ka shaqeeyaa gaadiidka dadweynaha waxaa lagu waajibay isticmaalka af-shareerka. Kuwan waxaa kamid ah tusaale ahaan kormeerayaasha tikidhada safarka. Taas beddelkeeda waajibkan ma saarna dadka ka shaqeeya tusaale ahaan wadista basaska marka ay shaqada waditaanka ku jiraan, sababtoo ah inta badan darawallada gaadiidka HSL waxay ku jiraan shir ammaan ah oo lagu ooday caag muraayad ka sameysan, xaaladda fayruska Korona darteedna maba iibiyaan wax tikidh ah mana qabtaan sidoo kale hawlaha adeegga macaamiisha. Waxaa kale oo darawallada laga doonayaa in ay ku dadaalaan nabadgelyada waddooyinka inta ay shaqadooda ku jiraan oo dhan.
Tirada dadka safraya weli waa ka hooseysaa sidii caadiga ahayd
Tirada dadka safraya waxay hadda ka hooseeysaa qiyaastii 30–40 boqolkii tiradii ay ahaayeen sannadkii hore wakhtigan oo kale. Si kastaba ha ahaatee waxaan u diyaargarownay kororka tirada dadka safraya. Isniinta 10.8. waxaan u wareegaynaa jadwalka deyrta oo dhaqdhaqaaq ahaan ka badan kii hore, kaas oo waafqsan jadwalka gaadiidka ee caadiga ah.
Waxaa kale oo aan la soconaynaa wakhtiyada dadka musaafurka ah ee ugu badan ay gaadiidka raacaan. Macluumaadka ku saabsan ciriiriga gaadiidka noocyadiisa kala duwan waxaa laga helayaa bogagga shabakadda HSL.
Macluumaad dheeraadka ah oo ku saabsan saameynta uu fayruska Korona ku yeeshay gaadiidka dadweynaha waxaad ka heleysaa: hsl.fi/korona